Ku dhiirrigelso laakiin ha raacin qaaciidooyinka | Martech Zone
Ku dhiirrigelso laakiin ha raacin qaaciidooyinka
Axad, Abriil 6, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Toddobaadkan waxaan aqrinayaa Starbucked, oo uu qoray Taylor Clark, si loogu diyaar garoobo Naadiga Buugaagta Ganacsiga ee Indianapolis. Taylor Clark wuxuu furayaa buuga isagoo kahadlaya Starbucks maalmihii hore iyo sida ay ufurneyd indhaha markay Starbucks furtay Starbucks cusub wadada dhinaceeda - labada dukaanna waxay ahaayeen dukaamada ugu badan ee silsiladda soo saaray.
Waxay igu dhiirrigelisay inaan qoro qoraalkan maxaa yeelay waxaan u maleynayaa inay jiraan 'hababka ugu fiican' laakiin dhab ahaantii ma jiraan qaacido ku saabsan suuqgeynta guuleysta. Wax badan ayaan ka qori doonaa tan Da'da Wadahadalka 2, laakiin runtii waan dhibsaday hadallada 'sida loo guuleysto' ee aad ka hesho shabakadda oo dhan. Waxaan u janjeeraa inaan iska ilaaliyo taageerida ama ku dhiirrigelinta boggaga internetka iyo baloogyada isku dayaya inay wax walba u karkariyaan qaabka. Qaaciddo ma jirto.
Waxa ku jira shabakadda ayaa ah waxyi badan!
Waxaa laga yaabaa in qaaciddada keliya ee suuqgeynta ay tahay in la kala sooco wax kasta oo aad sameyso… haddii si kale loo dhigo, iska ilaali qaaciddada. Waxaan u dhisay barnaamijyo si toos ah tirakoob ahaan loogu diro macaamiisha oo ay ahayd inay soo saaraan koror laba-godle ah oo ah jawaabaha. Xogtaasi way ansaxday, qaybtuna ma lahayn wax khalad ah, nuqulka iyo qaabeynta waxay la jaanqaadeen dhammaan 'qaaciidooyinka', xitaa waxaan leenahay qaar caan ah oo tuurtay saameynta iyo magaca / wejiga aqoonsiga giraanta - laakiin ololaha ayaa la qarxiyay .
Adoo raacaya qaaciddada, ma jirin wax kala soocaya ololaha boqolaal ama kumanaan ololeyaal kale oo raacay isla sharciyada. Marka - ololuhu wuxuu la dhaawacmay inta kale ee ka mid ah ololeyaasha qaabeysan, isla qashinka.
Samee Waxyaabaha. Ha sameyn waxyaabaha la sameeyo
Maxay adduunka uga dhigan tahay in blog-yada ay xoog sidan oo kale ah ugu soo saaraan shabakadda? Dadka qaarkiis waxay u maleynayaan inay tahay sababta oo ah kaqeybgalka ballaaran, mugga weyn ee ka kooban, iyo khibradda uu blogger u keenayo waxa ku jira. Waan hubaa in kuwani ay saameyn leeyihiin… laakiin intaas oo dhan maahan.
Qayb ka mid ah waxa ka dhigaya baloog si rafcaan u leh waa sida aysan ugu habboonayn heerarka suxufinimo ee caadiga ah. Qaar ka mid ah dadka wax qora ee wax qora ayaa u booda bisadu waxay la dagaalantaa tartanka. Blog ku saabsan sameynta baloogyo lacag ah oo ku saabsan cuntada wanaagsan. Waxaan mararka qaar jeclahay inaan ka hadlo siyaasada iyo iimaanka (oo had iyo jeer waxaan helaa jawaabo sun ah).
Blogs waxay bixiyaan waxyaabo iyo shakhsiyan labadaba, wax aan inta badan la xiriirin markay tahay blogga shirkadaha.
Xusuusnow xayeysiisyada caanka ah ee 'Snapple' sanadihii la soo dhaafay? Isticmaalka Wendy Kaufman, oo ah Snapple Lady, ayaa riixdey iibka Snapple ilaa 23 milyan oo doolar sanadkii ilaa 750 milyan sanadkii 1995. Wendy waxay ugajawaabeysay waraaqda taageereyaasha Snapple waqtigeeda, wakaaladuna waxay u maleysay inay noqon doonto wax weyn hab kor loogu qaado astaanta. Xayeysiintu waxay ahayd guul weyn!
Quaker ayaa la wareegay, Wendy waa la sii daayay, dhammaantoodna waxay noqdeen kaput… iyagoo raacaya qaaciddada! Quaker aakhirkii wuu quustay oo sii Snapple ha tago. Hadda Wendy waa lamaane Wendy Xidho - oo lagu daray cabbirka waxqabadka haweenka, kor loogu qaaday iyada oo loo marayo blog dabcan!
Ku noqoshada ujeedkeyga - ka faa’iideyso shabakadda si aad naftaada u dhiirrigeliso oo aad u hesho fikrado cusub oo ku saabsan waxa ay dadweynuhu ka sameynayaan suuqgeynta alaabadooda. Ha raacin qaaciidooyinka… tijaabada! Samee qaacido kuu gaar ah!
Anigu waxaan ahay Cisco I-Prize Final - Fadlan Taageer Fikradeena
Waxa shaqeynaya iyo wixii aan ku jirin xayeysiinta internetka + jaangooyooyin muhiim ah
Apr 9, 2008 at 12: 38 PM
Waxaan u maleynayaa jumlada ugu dambeysa - "Samee qaaciido kuu gaar ah!" - waa tan ugu muhiimsan. Luqadda ganacsiga, waxaa loogu yeeraa Dhaqanka ugu Fiican. Asal ahaan, raadi waxa shaqeynaya, dib u hagaaji, ka dibna u aqbal sida nidaamka caadiga ah ee hawlgalka. Tani waa waxa uu sameeyay Starbucks.
Waxay qaateen casharkii Henry Ford ee waxsoosaarkii badnaa, waxayna u adeegsadeen danahooda gaarka ah (“Waxaad yeelan kartaa midab kasta oo aad rabto, illaa iyo inta ay tahay codadka dhulka”), taas oo ka dhigtay iyaga inay ku guuleystaan ​​macnaha kharashka hoos u dhacay, waxay awoodeen inay xakamayso khibrada macaamiisha, oo kaliya samee waxyaalahaas iyaga ka dhigay kuwa ku guulaystay iyaga oo aan maleyn badan oo isku dayin waxyaabaha dhici kara.